Mpanamboatra sy mpamatsy fizaran-tany ivelan'ny tontolo iainana - Orinasa mpamaky sirika any ivelanyVacuum China
Zw32-40.5 Breaking Circuit Hv Vacuum any ivelany
◆ Ampiasao ny fepetra 1.Mamaritra ny mari-pana: -30 ℃ ~ + 60 ℃; 2.Altitude: ≤3000m; Hafainganana amin'ny rivotra: ≤34m / s; 4.Loto fandotoana: ≤IV. 5.Ny maripana fitehirizana: -40 ℃ ~ + 85 ℃. ◆ Parameter teknika lehibe NO. Vakitera Votoatin'ny sanda 1 1 volt kV 40.5 2 herinaratra maharitra 1min mahazaka herinaratra kV 95 3 taratra herinaratra mahazaka herinaratra kV 185 4 haavo hatrizay Hz 50 5 misy isa ankehitriny 630,1250, 1600 6 manome hazavana fohy manaparitaka kA 20, 25, 31.5 7 naoty fohy fanaovana hazakazaka fohy ankehitriny (tampon'isa) kA 50, ...
ZW32-12 andian-dahatsoratra ivelan'ny rivotra avo làlan'ny rivotra (Recloser)
ZW32-12 fanapahana volo ivelan'ny herin'aratra dia fantsom-panafody AC 50Hz 12kV 3-dingana ♦ Fomba fametrahana: fomba ametrahana; ♦ Fomba fiasa: rafitra fiasa lohataona sy mekanisma fandidiana andriamby maharitra; ♦ Karazan-tendrontany: tendrontany ambony, ambany ambany ♦ Fampiharana: substation 12kV ivelany, orinasa mpamokatra herinaratra. ♦ Boky torolàlana, herinaratra, fanaraha-maso lavitra. Fitsipi-pamantarana vokatra ♦ IEC62271-100 Switchgear avo lenta sy fanaraha-maso Fizarana 100: mpamadika faribolana AC ♦ GB198 ...
ZW32-24 Series Series High Voltage Vacuum Circuit Breaker (Recloser)
ZW32-24 fanapahana volo mihodina ivelan'ny tanàna dia fitaovana mihodina AC 50Hz 24kV 3kV 3-dingana ♦ Fomba fametahana: mipetaka amin'ny andry; ♦ Fomba fiasa: rafitra fiasa lohataona sy mekanisma fandidiana andriamby maharitra; ♦ Karazan-tsolika: tsato-kazo mitambatra; ♦ Fampiharana: substation 24kV ivelany, orinasa mpamokatra herinaratra. ♦ Karazan'asa, manual, herinaratra, fanaraha-maso. Fitsipiky ny vokatra ♦ IEC62271-100 Switchgear ary fanaraha-maso ambony herinaratra Fizarana 100: mpamadika solika AC ♦ GB1984 TOSIKARATRA avo AC Circuit break
ZW7-40.5 Andian-tsarimihetsika ivelan'ny rivotra avo lenta (Recloser)
ZW7-40.5 fanapahana volo ivelan'ny herin'ny vovo dia fitaovana AC 50Hz 40.5kV ivelan'ny trano 3-phase. ♦ Fomba fametrahana: fametrahana fototra; ♦ Fomba fiasa: rafitra fiasa lohataona sy rafitra fiasan'ny elektrômanetika; ♦ Fitaovana amin'ny poloney: silika vita amin'ny silika, seramika; ♦ Fampiharana: substation 33kV ivelany, orinasa mpamokatra herinaratra. ♦ Transformer ankehitriny: fametrahana anatiny, fametrahana ivelany. Fitsipi-pamantarana vokatra ♦ IEC62271-100 Switchgear avo lenta sy fanaraha-maso fizarana 100: AC Circuit-brea ...
ZW20-12 andian-dahatsoratra ivelan'ny rivotra malefaka tsy mihetsika
ZW20-12 fanapahana volo ivelan'ny herin'aratra dia fantsom-panafody AC 50Hz 12kV 3-dingana ♦ Fomba fametahana: napetaka ny tsato-kazo; ♦ Karazan-tsolika: tsato-kazo mitambatra; ♦ Fampiharana: substation 12kV ivelany, orinasa mpamokatra herinaratra. ♦ Karazan'asa: manual, herinaratra, fanaraha-maso. Toetran'ny tontolo iainana ♦ Altitude: <2000m; Temperature Ny mari-pana amin'ny rivotra: -40 ° C 〜 + 40 ° C; fiovan'ny mari-pana isan'andro <25 ° C; ♦ Hafainganan'ny rivotra <35m / s; ♦ Haavo maloto: IV; ♦ Toerana fametrahana: Tsy misy afo, loza ateraky ny fipoahana, valizy simika mahery ...